Indlu yakudala enethenisi, i-spa kunye negumbi lemidlalo - I-Airbnb
Indlu yakudala enethenisi, i-spa kunye negumbi lemidlalo
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVincent
IMaison Rider, ekwabizwa ngokuba yi “Château Witch Bay” yenye yezona zindlu zintle zookhokho eQuebec, eyakhiwa ngo-1880.Indlu yavuselelwa ngokupheleleyo ngo-2000 kwaye umsebenzi owenziweyo uye wayibuyisela ubungangamsha nobunewunewu beendawo zokuhlala zelo xesha.Le ndlu iyaqhubeka ukuthakazelisa namhlanje, kunye nomlingiswa wayo okhethekileyo, imbali yayo kwaye, ngokuqinisekileyo, igqwirha layo elikhulu lentsimbi elenziweyo elijonge enye yeenqaba.
Ilungele ukuhlangana kwakhona kosapho, ukurhoxa emsebenzini okanye ukuhlala nabahlobo. Le ndawo yokuhlala intle kakhulu kunye neendawo zayo ezinkulu zinokuhlala abantu abali-12. Amagumbi angama-25, amagumbi okulala ama-6, imigangatho emi-4-Umsebenzi womthi omangalisayo, iingcango zamaplanga eziqinileyo, imigangatho, iglasi enemibala-Isilingi eziphakamileyo, izinyuko zamaplanga.Le ndlu ingaqhelekanga iya kukunika ukuhlala ongalibalekiyo.
- Ukubanakho ukuqubha kwipropati ekumlambo waseFitch;
- Ichibi elihle kwipropati;
-Indlu entle, ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ikhululekile kakhulu;
-Indawo yomlilo yangaphakathi esebenzayo kunye nendawo yomlilo yangaphandle-sibonelela ngeenkuni!
-I-terrace enkulu yangaphandle ene-BBQ, iitafile kunye nezitulo;
-I-spa yangaphandle iindawo ezi-4;
- Uqhagamshelo lwe-wifi yesantya esiphezulu (50 Mbit / sec);
-Igumbi lokudlala elinetafile yepool, itafile yeping pong kunye netafile yosana;
- Uqhagamshelo lweselula lulinganiselwe kwindawo.Ifowuni yasekhaya iya kufumaneka ukuze uyithumele kwaye ufumane iminxeba.
42" HDTV ene-I-Netflix, I-Roku
Iintsuku eziyi-7 e Stanstead
4.94 · Izimvo eziyi-36
Ifakwe kwenye yezona ndawo zityelelwa kakhulu eQuebec, ezizezi Iilokishi zaseMpuma, iMaison Rider ibonelela ngamava aguquguqukayo kuko konke ukuthanda!Kufuphi uya kuba namava amnandi, uhambo lwendalo, iispa, ithambeka lokutyibiliza nokunye okuninzi!
Ujoyine nge- 2010 Julayi
Inombolo yomthetho: 303317
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stanstead